Nomery 10 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goun Grika Géorgien Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Luganda Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tigrigna Tiorka Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Genesisy Eksodosy Levitikosy Nomery Deoteronomia Josoa Mpitsara Rota 1 Samoela 2 Samoela 1 Mpanjaka 2 Mpanjaka 1 Tantara 2 Tantara Ezra Nehemia Estera Joba Salamo Ohabolana Mpitoriteny Tononkiran’i Solomona Isaia Jeremia Fitomaniana Ezekiela Daniela Hosea Joela Amosa Obadia Jona Mika Nahoma Habakoka Zefania Hagay Zakaria Malakia Matio Marka Lioka Jaona Asan’ny Apostoly Romanina 1 Korintianina 2 Korintianina Galatianina Efesianina Filipianina Kolosianina 1 Tesalonianina 2 Tesalonianina 1 Timoty 2 Timoty Titosy Filemona Hebreo Jakoba 1 Petera 2 Petera 1 Jaona 2 Jaona 3 Jaona Joda Apokalypsy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
10 Ary hoy i Jehovah tamin’i Mosesy: 2 “Manaova trompetra+ volafotsy roa, izay hotefenao amin’ny marotoa, ka izany no hampiasainao hamoriana+ ny vahoaka sy hampilazana fa tokony hiainga ireo toby. 3 Rehefa miaraka tsofina ireo, dia ny vahoaka manontolo no hamonjy ny fotoanany aminao eo amin’ny fidirana amin’ny tranolay fihaonana.+ 4 Fa raha ny iray ihany no tsofina, dia ireo mpiadidy, izany hoe ireo mpifehy ny arivo eo amin’ny Israely, no hamonjy ny fotoanany aminao.+ 5 “Rehefa tsofinareo hamoaka feo miovaova ny trompetra, dia hiainga ireo mitoby eo atsinanana.+ 6 Ary rehefa tsofinareo fanindroany hamoaka feo miovaova ny trompetra, dia hiainga kosa ireo mitoby eo atsimo.+ Hotsofina hamoaka feo miovaova ny trompetra, isaky ny miainga ny iray amin’ny fizarana misy an’ireo toby. 7 “Rehefa hamory ny fiangonana ianareo, dia tokony hitsoka+ trompetra, nefa tsy hovaovanareo ny feony. 8 Ireo mpisorona zanakalahin’i Arona no hitsoka azy,+ ary ho lalàna ho anareo mandritra ny fotoana tsy voafetra, hatramin’ny taranakareo fara mandimby, ny fampiasana ireo trompetra ireo. 9 “Raha hiady amin’ny mpampahory mila ady aminareo ianareo+ rehefa any amin’ny taninareo, dia hitsoka trompetra ianareo,+ ho fanairana ho amin’ny ady, ka hotsarovana tokoa eo anatrehan’i Jehovah Andriamanitrareo ianareo ary ho voavonjy tsy ho resin’ny fahavalonareo.+ 10 “Ary amin’ny andro ifalianareo,+ sy amin’ny fotoanan’ny fetinareo,+ ary isaky ny fiandohan’ny volana,+ dia hitsoka trompetra eo ambonin’ny fanatitra dorana+ sy ny sorona iombonana+ atolotrareo ianareo. Ho fampahatsiarovana ho anareo eo anatrehan’Andriamanitrareo ny fampiasana ny trompetra. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.”+ 11 Ary tamin’ny andro faharoapolon’ny volana faharoa, tamin’ny taona faharoa,+ dia niakatra avy teo amin’ny tranolay+ misy ny Tenin’ny Vavolombelona ny rahona. 12 Dia niainga ny zanak’Israely+ ka niala tany an-tany efitr’i Sinay, araka ny filaharan’ny fiaingany. Ary nijanona tany an-tany efitr’i Parana+ ny rahona. 13 Io no voalohany niaingan’izy ireo, araka ny baikon’i Jehovah nampitaina tamin’i Mosesy.+ 14 Koa ny fizarana* nisy ny tobin’ny taranak’i Joda no niainga voalohany, araka ny tafiny avy.+ I Nasona+ zanak’i Aminadaba no mpifehy ny tafiky ny taranak’i Joda. 15 I Netanela+ zanak’i Zoara kosa no mpifehy ny tafiky ny fokon’ny taranak’i Isakara. 16 Ary i Eliaba zanak’i Helona no mpifehy ny tafiky ny fokon’ny taranak’i Zebolona.+ 17 Dia noravana ny tranolay,+ ka niainga ny taranak’i Gersona+ sy ny taranak’i Merary,+ izay mpitondra ny tranolay. 18 Ary niainga ny fizarana nisy ny tobin’i Robena,+ araka ny tafiny avy. I Elizora+ zanak’i Sedeora no mpifehy ny tafiky ny taranak’i Robena. 19 I Selomiela+ zanak’i Zorisaday kosa no mpifehy ny tafiky ny fokon’ny taranak’i Simeona.+ 20 Ary i Eliasafa+ zanak’i Doela no mpifehy ny tafiky ny fokon’ny taranak’i Gada. 21 Ary niainga ny Kehatita, izay mpitondra ireo zava-masin’ny toerana masina,+ satria efa tafatsangana ny tranolay, amin’ny fotoana hahatongavan’izy ireo. 22 Ary niainga ny fizarana nisy ny tobin’ny taranak’i Efraima,+ araka ny tafiny avy. I Elisama+ zanak’i Amihoda no mpifehy ny tafiky ny taranak’i Efraima. 23 I Gamaliela+ zanak’i Pedazora kosa no mpifehy ny tafiky ny fokon’ny taranak’i Manase.+ 24 Ary i Abidana+ zanak’i Gideony no mpifehy ny tafiky ny fokon’ny taranak’i Benjamina.+ 25 Ary niainga ny fizarana nisy ny tobin’ny taranak’i Dana,+ araka ny tafiny avy. Izy ireo no vodilaharana mpiaro+ ny toby rehetra. I Ahiezera+ zanak’i Amisaday no mpifehy ny tafiky ny taranak’i Dana. 26 I Pagiela+ zanak’i Okrana kosa no mpifehy ny tafiky ny fokon’ny taranak’i Asera.+ 27 Ary i Ahira+ zanak’i Enana no mpifehy ny tafiky ny fokon’ny taranak’i Naftaly.+ 28 Toy izany no filaharan’ny fiaingan’ny zanak’Israely, araka ny tafiny avy, rehefa niainga izy ireo.+ 29 Ary hoy i Mosesy tamin’i Hobaba zanak’i Regoela+ Midianita, rafozandahin’i Mosesy: “Hiainga izahay ka handeha ho any amin’ilay toerana nolazain’i Jehovah hoe: ‘Homeko anareo izy io.’+ Koa andao re hiaraka aminay e! Dia hanisy soa anao tokoa izahay,+ fa efa nilaza ny hanisy soa ny Israely i Jehovah.”+ 30 Fa hoy izy taminy: “Tsy hiaraka aminareo aho fa hody ho any amin’ny taniko+ sy ny havako.” 31 Dia hoy i Mosesy: “Aza dia ilaozana re izahay e! Ianao mantsy no mahafantatra tsara izay azonay itobiana atỳ an-tany efitra, ka ho toy ny masonay ianao. 32 Ary raha hiaraka aminay ianao,+ dia izay soa hataon’i Jehovah aminay no mba hataonay aminao koa.” 33 Koa niala teo amin’ny tendrombohitr’i Jehovah+ izy ireo ka nandeha lalana telo andro. Nialoha azy ireo foana ny Vata misy ny fifanekena+ nataon’i Jehovah, nandritra izany lalana telo andro izany, mba hitady toeram-pialan-tsasatra ho azy ireo.+ 34 Ary teo ambonin’izy ireo ilay rahon’i+ Jehovah rehefa antoandro, tamin’ny fotoana niaingan’izy ireo avy teo amin’izay nitobiany. 35 Rehefa niainga ilay Vata, dia hoy i Mosesy: “Mitsangàna, Jehovah ô, ka aoka hiparitaka ny fahavalonao.+ Aoka handositra tsy ho eo anatrehanao ireo mankahala mafy anao.”+ 36 Rehefa nijanona kosa izy io, dia hoy izy: “Miverena, Jehovah ô! Miverena ho amin’ny Israely miisa an’alinalina.”+
^ Jereo No 1:52 f.a.p.